के पनौतीका विद्यार्थीको गुनासो सुन्ला त स्थानीय सरकारले ? – मिलिजुली खबर
के पनौतीका विद्यार्थीको गुनासो सुन्ला त स्थानीय सरकारले ?
२०७६ साल चैत ३ गते पनौती बसपार्क नजिकैको सडकमा हिड्दै गरेका आमा छोरी जुनी माया गोले र स्मारिका भोलनलाई टिपरले ठक्कर दियो । गम्भीर घाइते आमा छोरीको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भयो ।
ठीक त्यस्तै प्रकृतिको घटना यहि मंसिर ३ गतेपनि पनौतीमा भयो । बाटोमा हिड्दै गरेका बृद्धलाई टिपरले ठक्कर दियो । काभ्रेमा उपचार हुन नसकेपछि बा ३ क १८४७ नम्बरको टिपरको ठक्करबाट घाइते हुनुभएका पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ८ का मधुसुदन केसीको काठमाण्डौमा उपचार भइरहेको छ । परिवारका अनुसार घाइते बृद्धको अझै होस आउन सकेको छ ।
यो दुई प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । पछिल्लो समय पनौतीमा टिपर जन्य सडक दुर्घटना निकै हुन थालेको छ । यस तर्फ न त स्थानीय सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । न त प्र हरीको नै । विद्यालयको गेटबाटै गुट्छन् टिपर । कुन बेला दुर्घटनामा परेर घाइते हुने हो वा ज्यान नै लिने हो पत्तो छैन् ।
साँघुरो सडक । टिपरको तीब्र बेग । पनौती पछिल्लो समय टिपर दुर्घटनाको हब बनिरहेको छ । चाँहि आफै पल्टने हुन् या त अरु सवारी साधनलाई ठक्कर दिने । बेथानचोक गाउँपालिकामा सञ्चालित ढुंगा खानी, क्रसर र पनौतीको विभिन्न क्षेत्रमा रहेको क्रसरबाट सयौँ टिपर निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि गुडिरहेका छन् ।
तर यसलाई ब्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार र प्र हरी प्रशासनले कुनै चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । क्रसर र टिपर पनौती र बेथानचोक गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत हो । त्यस्तै प्रहरीको पनि कमाइ हुने राम्रो स्रोत बनेका छ टिपर र क्रसर उद्योग । तर आफ्नै जनता मारेर आयस्रोतको नाममा निर्बाध टिपर चलाउन दिनु चाँहि कत्तिको न्यायचित हो ? पनौती बासीले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।
टिपरका कारण त्यस भेगका आम नागरिक असुरक्षित बनेका छन् । जुन कुरालाई पनौती क्षेत्रका विभिन्न चार वटा विद्यालयका विद्यार्थीले आज सडकमा गरेको प्रर्दशनले प्रष्ट पारेको छ । हातमा कलम र कापी समाउनु पर्ने विद्यार्थी प्ले कार्ड बोकेर सुरक्षाको प्रत्याभूति मागिरहेका छन् । काभ्रे बोडिङ स्कुल, इन्द्रेश्वर माध्यामिक विद्यालय, भालेश्वर माध्यामिक विद्यालय र सामुदायिक बोडिङ स्कुलका विद्यार्थीहरुले सडकमा प्रदर्शन गरे ।
विद्यार्थीले सुरक्षाको माग गरे । विद्यालय आउँदा जाँदा असुरक्षित रहेको कुरा सबैलाइ सुनाएर । खास गरी स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कानको जाली नै फुट्ला झै टिपरको हर्न, तीब्र गति । यी सबै चिज टिपर चालक आफैले बिचार गर्नुपर्ने हो । तर टिपर चालकहरुमा यो चेत अझै खुलेको छैन् । स्थानीय सरकार र प्र हरीले खाली स्रोतमा मात्रै आँखा लगाइरहेका छन् । तर टिपर चालकलाई बेला बेला सचेत गराउने काममा कुनै पहल कदमी गरेको पाइदैँन ।
पनौतीका विद्यार्थीहरुले टिपरको ज्यादती बढेको भन्दै नगरपालिका घेराउ गरे । आफ्ना माग शिक्षक र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मार्फत नगरपालिकासंग राखे । विद्यालयहरुले टिपर सञ्चालनको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्ने मुख्य माग गरेका छन् । त्यस्तै विद्यालय समयमा टिपर सञ्चालन गर्न नदिन भनेका छन् ।
नगरपालिकाका बरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत इन्द्र प्रसाद अधिकारीले विद्यार्थी, शिक्षक र स्थानीयले संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापन बुझ्दै मागप्रति नगरपालिका गम्भीर रहेको बताएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाए मात्रै पुग्दैन । यसलाई ब्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गराउन अझै दबाबको आवश्वक पर्छ । अन्यथा फेरी अन्य पैदल यात्री पिटरको निशानामा नपर्लान् भन्न सकिन्न ।
सिन्धुपाल्चोकका ५ जनाले घोषणा गरे एमालेको केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी
दिनेश लामा संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को सभापतिमा निर्विरोध निर्बाचित होलान् ?